DOWNLOAD GOM PLAYER N'EFU NA RUSSIAN - MMEMME NYOCHA - 2019
Site na ụda faịlụ dị ugbu a na Ịntanetị, ọ dị ezigbo mkpa inwe ike ịrụ ọrụ ngwa ngwa na ha. Maka nke a, ọ dị mkpa na ha nwere obere olu ma na-agbakọ ọnụ. N'okwu a, archive compressed dị mma, nke na-enye gị ohere ịchekwa faịlụ na otu nchekwa, ebe ị na-ebelata ibu ha. N'isiokwu a, anyị ga-enyocha ihe omume nwere ike ịpịkọta faịlụ ma kpochapụ ha.
Mmemme nwere ike mpikota onu, kpochapu, ma mee ihe ndi ozo na ebe nchekwa ihe a na-akppo nchekwa. E nwere ọtụtụ n'ime ha, nke ọ bụla dị iche na arụmọrụ na ọdịdị ya. K'anyị ghọta ihe nchekwa.
N'ezie, onye a ma ama na otu n'ime nchekwa ihe kachasị emetụta bụ WinRAR. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ na-arụ ọrụ na ngwanrọ a, n'ihi na ọ nwere ọtụtụ uru ma nwee ike ime ihe ọ bụla ọzọ archiver mere. Ogologo nchịkọta faịlụ site na WinRAR mgbe ụfọdụ ruru pasent 80, dabere na ụdị faịlụ.
O nwekwara atụmatụ ndị ọzọ, dị ka ịdebe ma ọ bụ weghachite akwụkwọ ndekọ mebiri emebi. Ndị mmepe na-echekwa banyere nchekwa, n'ihi na na WinRAR, ị nwere ike ịtọ paswọọdụ maka faịlụ mpempe akwụkwọ. Uru nke usoro ihe omume ahụ nwekwara ike ịgụnye SFX-edebe ihe ndekọ, izipu ebe nchekwa site na mail, onye njikwa faịlụ dị mma na ọtụtụ ndị ọzọ, na ụkọ ihe dị iche iche bụ ụbọchị ole na ole iji jiri mbipute n'efu.
Onye na-esote onye na-esonụ na ndepụta anyị ga-abụ 7-Zip. Onye nchekwa a na-ewu ewu n'etiti ndị ọrụ yana enwere ọtụtụ atụmatụ bara uru. Enwere nkwado maka ezoro ezo AES-256, nrụpụta multi-threaded, ikike iji nwaa maka mmebi na ọtụtụ ndị ọzọ.
Dị ka ọ dị banyere WinRAR, ndị mmepe echefughị ​​itinyekwu nchebe ma tinyenye ntinye nke paswọọdụ maka ebe nchekwa ahụ. Otu n'ime ihe ndị a na-ahụkarị bụ nke a ma ama, nke ụfọdụ ndị ọrụ nwere ike ọ gaghị aghọta ụkpụrụ nke arụ ọrụ, ma ọ bụrụ na ị na-ele ya anya, software ahụ nwere ike ịba uru ma ọ bụ nke na-agaghị emeli. N'adịghị ka ngwanrọ mbụ, 7-Zip bụ kpam kpam n'efu.
Akụrụngwa a adịghị adị ka ewu ewu dị ka nke abụọ gara aga, ma ọ nwere ọtụtụ uru m ga-achọ ịkọ. Ihe kachasị mkpa nke nchekwa a bụ na ọ na - eme ka ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ nwere ike ịma ya. A na-eme ihe niile na ya dị ka ihe dị mfe ma mara mma dịka o kwere mee, mana ndị mmepe na-elekọta ọrụ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, iweghachị (ọ bụghị olu) nke ihe oyiyi, na-agbakwụnye mmiri, na-agbanwe faịlụ ka * .pdf na ihe kacha amasị bụ ọrụ na netwọk mmekọrịta na e-mail maka izipu ebe nchekwa. O di nwute, ihe omume a enweghi onwe ya ma o nwere obere oge ikpe.
J7Z bụ usoro dị mfe ma dị mfe maka ịrụ ọrụ na faịlụ mmechi, nke nwere naanị ọrụ ole na ole. Ihe kachasị baa uru n'ime ha gụnyere nhọrọ nke nrụpụta nsogbu na, n'ezie, nzochi. Ọzọkwa, eziokwu ahụ bụ na ọ bụ n'efu, mana ndị mmepe adịghị agbakwunye ya n'asụsụ Russian.
Enweghi ike mara software a dika ndi ozo n'elu, ma o nwere otutu ihe ndi agbakwunyere site n'oge mmezi. Otu n'ime ọrụ ndị a bụ ntụgharị aka nke archives na usoro ọzọ, na mgbakwunye na ha ị nwere ike ịgbanwere ihe oyiyi disk. Usoro ihe omume ahụ nwekwara nzochi, nkwado maka idebe ihe nchịkọta onwe onye, ​​ọtụtụ usoro, ịmepụta paswọọdụ na ngwaọrụ ndị ọzọ. Nanị IZArc na-enweghị ike bụ na enweghị nkwado zuru ezu. * .rar na-enweghị ike ịmepụta ihe ndekọ dị otú ahụ, mana ntụpọ a anaghị emetụta oke ọrụ.
Dị ka ọ dị na ngwanrọ gara aga, a maara usoro ihe a naanị na mpaghara mgbagwoju anya, mana enwere ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ. ZipGenius nwere ike ime ihe niile nwere ike IZArc, ma e wezụga maka ịgbanwe ụdị ebe nchekwa na ihe oyiyi. Otú ọ dị, na IZArc, dịka ọtụtụ nchekwa ndị ọzọ, enweghi ike ịmepụta ihe nkiri eserese, esepu maka ọkụ, ikiri ihe ndekọ archive dị na ngwanrọ a. Ihe ndị a na-eme ka ZipGenius bụrụ ihe pụrụ iche ma e jiri ya tụnyere ndị ọzọ edere.
Ihe nchekwa a bụ otu n'ime ihe kachasị adaba n'ihi ọdịdị ya, nke yiri nke Windows Explorer. O nwere ọtụtụ atụmatụ bara uru, ọbụna ndị na-enye nchekwa. Dịka ọmụmaatụ, paswọọdụ paswọọdụ nke na-enye gị ohere ịmepụta igodo dị nchedo iji kpuchie data gị. Ma ọ bụ onye nchịkwa paswọọdụ nke na - enye gị ohere ịchekwa ha n'okpuru aha ụfọdụ, nke mere na ọ dị mfe iji mgbe itinye ha. N'ihi ntụgharị na njirimara ya, usoro ihe omume ahụ nwere ọtụtụ uru ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị enwe minuses.
Nke a software bụ ihe kacha mma mkpakọ n'etiti ndị fọdụrụ. Ọbụna WinRAR ejighị ya tụnyere ya. Na ngwanrọ a, e nwekwara ntinye nke paswọọdụ maka archive, nchịkọta ihe nchịkọta onwe ya, wdg, mana enwekwara ọghọm na ya. Dịka ọmụmaatụ, ọ nọ na-arụ ọrụ na usoro faịlụ ruo ogologo oge, tinyekwa na ọ nwebeghị mmelite ọ bụla site n'afọ 2007, ọ bụ ezie na ọ dịghị ada mbà n'enweghị ha.
Download KGB Archiver 2
Nke a bụ ndepụta dum nke mmemme maka mkpakọ faịlụ. Onye ọ bụla ọrụ ga-amasị usoro nke ya, ma ọ dabere na ihe mgbaru ọsọ ị na-achụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụta faịlụ dị ka o kwere omume, mgbe ahụ, KGB Archiver 2 ma ọ bụ WinRAR ga-adịrị gị mma. Ọ bụrụ na ịchọrọ ngwá ọrụ dị ka ọrụ dị ka o kwere mee ma nyere aka dochie ọtụtụ mmemme ndị ọzọ, mgbe ahụ ZipGenius ma ọ bụ WinZip bara uru maka gị. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ naanị otu ihe a pụrụ ịdabere na ya, nke nweere onwe ya na nke a na-ewu ewu maka ịrụ ọrụ na ebe nchekwa, mgbe ahụ, ọ gaghị adị 7-ZIP.